Phezulu kakhulu ethandwa kakhulu Isitshayina websites Mandarin ulwimi Esikolweni Mandarin eselunxwemeni - IVIDIYO INCOKO zwelonke! Onke amazwe, iinqwelo, lonke ihlabathi.
Phezulu kakhulu ethandwa kakhulu Isitshayina websites Mandarin ulwimi Esikolweni Mandarin eselunxwemeni
Isetyenziswa lisebe izigidi zabantu yonke imihla
Phezulu kakhulu ethandwa kakhulu zephondo kwi-Isitshayina ulwimiZeziphi ezona ethandwa kakhulu zephondo kwi-China? Kweli nqaku, siza kaloku wena phezulu kakhulu ethandwa kakhulu Isitshayina websites. Oku kuya luncedo kuba foreigners abakhoyo kuvunyelwe, abo ufuna ukuphila kwi-China, kodwa andazi apho zephondo ukusebenzisa. Baidu - njengathi Google kwi-KWETHU, ingaba baba engundoqo ukukhangela injini kwi-China. Ngokunxulumene traffic, ukukhangela isigebenga izintlu anesihlanu ehlabathini kwaye lelona watyelela site kwi-China. Abantu sebenzisa Baidu ukukhangela websites kwaye iinkonzo zonxibelelwano. Thelekisa ezinye Isitshayina ukukhangela amandla Baidu sele captured phezulu kwimakethi kwi-Isitshayina ukukhangela injini. Hayi kuphela kwi-China, kodwa kanjalo kwi-Japan, i-South Korea, ne-United States. Robin Li yi kakuhle-ezaziwayo ikhompyutha engineer kwi-China, ukho omnye founders ka-Baidu. Namhlanje, Baidu inika iinkonzo ezahlukeneyo, kuquka umculo, yokukhangela, ngxoxo foram, encyclopedia, imifanekiso, iividiyo, njl. njl, kubalulekile kakhulu elicetyiswayo site. QQ ngu-China ke, oyena portal kuba integrating Isitshayina iindaba, interactive uluntu, ukuthenga iimveliso, kwaye widely kusetyenziswa iinkonzo ezisisiseko. QQ sibonwa njengoko i-intanethi incoko software ukuba lufana usebenzisa i-MSN kwaye i-Skype. I-qi iwebhusayithi kanjalo enye uninzi watyelela websites kwi-China. Uninzi young abantu China sebenzisa QQ kwi yabo yonke imihla ubomi. Kule site ilanlekile ka-imidlalo kwaye izixhobo. Izigidi zabantu ingaba ukudlala imidlalo kwaye ekubeni fun.
Esisicwangciso-mibuzo malunga QQ sesinye uninzi ethandwa kakhulu loluntu iziganeko kwi-China.
Xa safika kwi-China, unako ukubona uninzi abantu usebenzisa ngayo web cafes. Dumping - wobulali abahlali umsebenzi kwi phezulu iqela Isitshayina iinkampani.
Baidu enza imali usebenzisa ads kwi-iziphumo zokukhangela
Oko ezijolise restaurant reviews ezifana i-yelp, kwaye sele a ubuso hayi kuphela izixeko kuwo-China.
Attenuation kanjalo ubani kakuhle-kwaphuhliswa system kwaye rewards indlela, ngokunjalo i-analytical iqonga ishishini abanini-mhlaba, kwaye nkqu a ethandwa kakhulu site kuba iqela purchases evumela ukuba abasebenzisi ukufumana juicy discounts e restaurants ukuba bonke sebenzisa le nkonzo.
Wonke umntu isebenzisa iqela ukuphela-ngaphandle iincoko apho kuwe kudla, uzakufumana i-nasiphelo umsinga ka-ukuphela-ngaphandle amakhonkco okanye thatha iscreenshot. I-sinusoidal, saziwa kwi-Isitshayina njengoko omtsha iliza, efana Isitshayina Yahoo.
Kubalulekile elizeleyo ulwazi site kwi-China ekuboneleleni imidlalo, iindaba, emidlalo, loluntu iziganeko, imfundo, ubomi, imbali, kwaye ngaphezu a anamashumi upapasho kwi-China kwaye jikelele ehlabathini.
Ziyaziwa kuba yayo emidlalo iindaba kwaye isiganeko iingxelo. Uninzi emidlalo ifeni unako ndwendwela kwi-site yonke imihla. Ngoku yakho Weibo (comparable ukuba Itwitter) kukuthi inani elinye kwi-China. Injongo site kukubonelela uzalise ulwazi kuba Isitshayina abantu jikelele ehlabathini. Youku - njenge YouTube e-United States, olona watyelela ividiyo site kwi-China. YuKU-literally kuthetha"mikhulu kwaye elihle". Uyakwazi jonga uninzi videos kule ndawo for free. Abantu layisha phezulu yakho videos kwaye wabelane nabo nabanye abantu. Unako kanjalo ukhuphele oyithandayo videos for free. Ukuba ufuna ukubukela a Isitshayina TV bonisa, eyona ndawo zenza Youku. Youku luthathe iifama a global indawo traffic kwaye kwi-China. Kwi-TV ibonisa, iimifanekiso, umculo, Youku sele sele kuya kuba iyaphephezela, iyafana YouTube kwi-KWETHU. Isiqendu Kuba copyright izizathu kwiminyaka yakutsha nje, Youku ngoku kuphela ivumela abantu China ukuba akunyanzelekanga ukuba ndiyinqaye zabo videos, apho sele ekhokelwa ukuya kwi-nciphisa traffic imfuneko. I-avareji wachitha ixesha kwi-site zibonakele decreased ngenxa ezinye ividiyo zephondo ekubeni nako compete kunye Youku. Jindong - njenge Amazon kwi-KWETHU, kubalulekile phezulu watyelela i-e-Commerce iwebhusayithi kwi-China. Jindong sesinye oyena British-intanethi retailers kwi-China. Ngo-oktobha, ayo isixhosa-ulwimi iwebhusayithi abazinikeleyo ukuba weziganeko zeenqanawa jikelele ihlabathi libekho misa. I company waba waseka yi-Liu Quandoom (eyaziwa njenge Ngurichard Liu) ngojulayi, kwaye yayo iqonga USUK waphuma kwi-Intanethi. Yona iqalwe njengokuba magneto-optical kwi-intanethi-store, kodwa kamsinya diversified, kuthengiswa electronics, mobile phones, iikhompyutha, njalo-njalo. Jindong Mall itshintshe yayo ummandla igama ukuthenga ngojuni kwaye JD. Taobao ufumana i-intanethi inqwelo indawo kuba Isitshayina kubathengi abakhoyo ikhangela omkhulu oyikhethileyo, ixabiso kwaye ukunceda. Eli lelona ethandwa kakhulu CC (consumer - kwi-consumer) kwi-intanethi imarike kwi-China, iyafana eBay. Taobao ivumela amashishini amancinci kwaye abantu ukucwangcisa stores kwi iqonga, kwaye abathengisi bathenga ngamalungelo ka-iimveliso okanye iinkonzo unako ngalo okanye resell yakho iimveliso kwi-Taobao ndithenge kwiivenkile ezikwi-intanethi. Cheap consumer izinto ingaba ethandwa kakhulu kwi-Taobao, kwaye oku kuquka yonke into ukususela underwear ukuba indlu izinto. Ukuhamba literally"ngexesha umgama"yindlela kuluncedo kwaye reliable ukuhamba kule ndawo. Oko sele phezulu English version (ngokunjalo isijamani, isifrentshi, Isivietnamese kwaye Russian iindawo, njl. njl.), oko kukholisa ukuba sele efanayo njengoko amaxabiso ayo Isitshayina counterpart, omnye rarity ukuba ikhona apha kwi-China. Feng Wenchang ingaba iqela esekelwe kwi-Hong Kong okanye kwi-i-TV stations ukuba amabango kuba i-kujike ethandwa kakhulu iwebhusayithi aimed kakhulu ngexesha mainland. Isixhosa isihloko-Phoenix-TV. Jikelele-injongo iindaba site, kuba inkoliso yawo, Fang likhule kwi-China ngokusebenzisa ngamanye amaxesha contradictory iindaba exchanges kwaye info rich ukuba continental counterparts ingaba rhoqo unwilling ukuzoba ngaphandle kakhulu kakhulu ingqalelo okanye contempt kwi-mandla. Oku imfihlo izibhengezo site. Layo iinkonzo ziquka izindlu, ukukhangela umsebenzi, kusetyenziswa iintengiso, imidlalo, njalo-njalo. Kakhulu esiluncedo kuba abahlala e-China. Dongsheng kwi-Isitshayina kuthetha"isixeko", kuyinto kakuhle-kwaphuhliswa isixhobo nokumisa unxulumano phakathi kwabantu abahlala efanayo isixeko. I company iququzelela ads yakhe imarike ukuze iquke umqolo iinkonzo neemveliso kwi iwebhusayithi yayo, i company iququzelela ads kwi-imarike ixesha iindidi ezifana imisebenzi, izindlu, kusetyenziswa izinto, automotive, etyheli amaphepha, Pets kwaye tickets, akekho thatha kakhulu ixesha nomzamo ukufumana oko kufuneka uphinde ufumane iinkcukacha zoqhagamshelwano zomntu othe kuyo ngaphakathi. Yenkampani-intanethi imarike ivumela wobulali traders kwaye abasebenzisi bamanzi ukuba vala phantsi, exchange ulwazi, kwaye ukuqhuba ishishini.
Ndivuma Ukuqeshwa, booking
Maimaim-poana Antler lahatsary Chats amin'Ny
makhe incoko fumana ividiyo dating bukela ividiyo familiarity esisicwangciso-mibuzo roulette-intanethi free i-intanethi ividiyo incoko amagumbi Dating acquaintance abantu ividiyo Dating ngaphandle ubhaliso kuba free Chatroulette engeminye omnye abafazi wishing ukuya kuhlangana nawe ividiyo incoko erotic